Wararka - Saaxiibbada shirkadda Wadnaha xilliga Guga waxay soo booqdaan qalbiyo diiran
Saaxiibbada shirkadda Wadnaha xilliga Guga waxay soo booqdaan qalbi diiran
Munaasabada xilliga gu'ga, si dadka qaaska ah ee shirkadda loo dareensiiyo daryeelka shirkadda, oo loogu noolaado Maalinta Sannadka Cusub oo diiran oo nabad ah, Wang Xiaodong, maareeyaha guud ee Baakadaha dawooyinka ee Chengfeng, iyo xubnaha hoggaanka u tegey qoyska asxaabta gaarka ah ee shirkadda si ay tacsi ugu diraan.
Booqashada tacsida, hogaamiyaasha baakooyinka dawada ee ChengFeng waxay faahfaahin ka bixinayaan xaalada asxaabta khaaska ah xaalada nolosha qoyska iyo dhibaatooyinka dhabta ah ee gaarka ah, waxayna u sheegeen waxa ay yihiin dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka ka muuqan kara shirkada waqti kasta, waa inaad si fiican u daryeeshaa noloshaada kuna dhiiri gelisaa iyaga si aad u ilaaliso xaalad maskaxeed maskaxeed si aad nolosha ugu wajahdo si togan, si aad ugu sii duceyso ciidaha.
In kasta oo tacsidu aysan qaali ahayn, laakiin "jacaylkan" ayaa ah hadiyadda ugu diirran ka hor Iidda Guga, maahan oo keliya diiran asxaab gaar ah, laakiin sidoo kale runti ha u oggolaadaan asxaabtu inay ku raaxaystaan ​​daryeelka iyo diirimaadka hoggaanka shirkadda.
Cao Huiying aad ayuu u qiirooday oo wuxuu yidhi, “Madaxda shirkaddu had iyo jeer way ila fekeraan. Waxay had iyo jeer iga fikiraan aniga marka ay jiraan wax fiican. Waxay naga daneeyaan oo noo muujiyaan naxariis ka hor habeenka Gu'ga.
Waad iga fikirteen, runtii qalbiyadeenna ha aad u kululaadaan.
Ma aqaan wax aan idhaahdo, laakiin waxaan dadaal badan u gali doonaa sidii aan u qancin lahaa shirkadayda iyo naftayda…
Booqashada ka hor Bandhigga Gu'ga, Chengfeng asxaabta shirkadda baakooyinka caafimaad ee jiilaalka qabow si ay u dareemaan diirimaad iyo daryeel, si qoysaska qaaska ah ugu farxaan Sannadka Cusub, si wax ku ool ah kor ugu qaadaan wada noolaanshaha iyo xasilloonida shirkadda.
Waqtiga boostada: Dec-20-2020